के हो उच्च रक्तचाप ??? – NawalpurTimes.com
के हो उच्च रक्तचाप ???
प्रकाशित : २०७६ मंसिर ९ गते २०:०४
आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुहोस्ः सन्तुलित आहारमा बढी जोड दिने वा आफ्नो स्वस्थ तौललाई कायम राख्ने।
नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने (हप्ताको कम्तीमा पाँच दिनसम्म हरेक दिन छिटो हिँड्ने, दौडिने, कम कम से कम ३० मिनेट पौडी खेल्ने) धूमपान नगर्ने।
समयमै चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्। पूर्ण शारीरिक जाँच र उचित परीक्षण गराउनुपर्छ। प्रायः उच्च रक्तचाप बाहेक अन्य असामान्यताको पहिचान हुँदैन तर यस्तो अवस्थालाई इसेन्टल हाइपरटेन्सन भनिन्छ।
नियमित रुपमा निह औषधि सेवन गर्ने। अन्यथा ती औषधि लाभदायी हुँदैनन्। उच्च रक्तचाप बिरामीले आफ्नो रक्तचापको नियमित जाँच गराइराख्रनु पर्छ। साथै चिकित्सकको निर्देशन अनुसार समयसमयमा स्वास्थ्य जाँच गराउन जानु पर्छ। यसो गर्नाले तपाईंको रक्तचाप कतिको घटेको वा बढेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। र सोही अनुसार चिकित्सकले औषधि मात्रा समायोजन गर्नेछन्।
चिकित्सकको सल्लाहबिना तपाईं औषधि सेवन गर्न नछाड्नुहोस्। यदि औषधिको कारण केही प्रतिकूल असर भएमा यसबारे आफ्नो चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।